होन्डाको सीबी३५० आरएस स्क्र्याम्बलर बाइक लन्च « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
होन्डाको सीबी३५० आरएस स्क्र्याम्बलर बाइक लन्च
होन्डाले सीबी३५० आरएस स्क्र्याम्बलर बाइक लन्च गरेको छ । भारतमा हिजो सोमबार लन्च गरेको बाइकको मूल्य १ लाख ९६ हजार भारु तोकिएको छ ।
होन्डाले गत वर्षको अन्त्यमा लन्च गरेको सीबी३५० को विस्तारित भर्सन नै यो बाइक हो र यी दुवै बाइकमा धेरै समानता पनि छन् ।
दुवै बाइकले हाफ-डुपलेक्स क्र्याडल प्लेटफर्मलाई साझा गरेका छन् । यद्यपि हालको मोडल पहिले भन्दा थप स्पोर्टी छ भने यसको मुख्य आकर्षणमा टक र रोल सिट, ड्युअल टोन फ्युल टयांक, एलईडी टेलल्याम्प र फ्रन्ट फोर्क तथा अन्डरसिटमा बुट आदि छन् ।
यी वाहेक सो मोटरसाइकलमा स्पोर्टी ग्रयाबरेल, स्किड प्लेट, वाइड प्याटर्न टायर तथा दुवैतिर सार्प एलईडी टर्न इन्डिकेटर आदि छन् ।
डिजिटल एनालग इन्स्ट्रयुमेन्टमा ब्याट्री भोल्टमिटर रिडिङ, गियर पोजिसन इन्डिकेटर, होन्डा सेलेक्टेबल टर्क कन्ट्रोल (एचएसटीसी) र हिट सिल्डका साथ ब्ल्याक फिनिसिङ एक्जस्ट सिस्टम दिइएको छ ।
भारतमा होन्डा सीबी३५० लन्च भए पश्चात यो सेगमेन्टमा राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । नेपाली बजारमा पनि यो बाइक ल्याउने तयारी भइरहेको होन्डाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले बताएको छ । (नेपाल अटो)
टाटाद्वारा भ्यालेन्टाइन डेमा स्पेशल ड्राइभ सेफ्टी इन स्टाइल कार्यक्रम आयोजना
टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेसिङगले भ्यालेन्टाइनको अवसरमा भ्यालेन्टाइन डे स्पेशल ड्राइभ सेफ्टी इन स्टाइल
नेपालमा मोटरहेड स्पोर्ट्स बाइकको मूल्य बढ्यो, थाहापाउनुहोस् नयाँ मूल्य सूची!
नेपाली बजारमा उपलब्ध मोटरहेडको स्पोर्ट्स मोडल बाइको मूल्य बढेको छ । नेपालका लागि मोटरहेडको आधिकारिक
टीभीएस जुपिटर जेडएक्स नयाँ इन्टेलिगो प्रविधिको साथ लन्च
नयाँ इन्टेलिगो प्रविधिको साथ टीभीएस जुपिटर जेडएक्स स्कुटर बजारमा लन्च गरिएको छ । नयाँ जुपिटर
अब मासिक ७,४४४ किस्तामा टीभीएस अपाचेका बाइक किन्न सकिने !
टीभीएस अपाचे बाइक अब मासिक ७,४४४ किस्ता तिरेर किन्न सकिने भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले
यामाहाको एसआर ४०० को फाइनल एडिसन बाइक रेट्रो लुकको साथमा जापानमा लन्च
रेट्रो लुकको साथमा जापानमा लन्च भयो यामाहा एसआर ४०० को फाइनल एडिसन गरिएको छ ।